मुनिबा मजारी: एक साहसी नारीको कथा ! - Laltin Media
Home»मोटिभेसन»मुनिबा मजारी: एक साहसी नारीको कथा !
By लाल्टिन डट कम July 5, 2022 No Comments2 Mins Read
मुनिबा मजारीको जन्म ३ मार्च १९८७ मा भएको हो । मजारीलाई पाकिस्तानको आइरन लेडी पनि भनिन्छ। बीबीसी द्वारा २०१५ को १०० प्रेरणादायक महिलामा छनोट पछि उनी संयुक्त राष्ट्र संघको लागि पाकिस्तानकी महिला राजदूत बनिन्। उनले २०१६ मा फोर्ब्स ‘३० अन्डर ३०’ को सूचीमा पनि स्थान बनाएकी थिइन्।
उनी यहाँसम्म आउँदाखेरि उनको जीवनयात्रा भने त्यति सहज थिएन । १९ वर्षको उमेरमा उनको विवाह भयो । उनी २१ वर्षकी हुँदा कार दुर्घटनामा परी उनको मेरुदण्डमा आघात पर्यो र उनी जीवनभरका लागि ‘व्हिल चियर’ मा बस्न बाध्य भईन्। साथसाथै, सो दुर्घटनामा उनले आफ्नो आमा बन्ने क्षमता पनि गुमाईन् । उनले आफ्नो जीवनको अमूल्य दुई वर्ष अस्पतालको बेडमा गुजार्न पर्यो । यसैबीचमा, उनका पतिले उनलाई छोडीदिए । भाग्यले उनलाई यसरी पछार्यो की उनी अब के गर्ने भनेर रणभुल्लमा परिन् । दु:खका दिनहरुले उनलाई घेरेका थिए । उनले आफ्नो जीवनको सबै चिज गुमाएकी थिईन् ।
एकदिन अचानक उनको मनमा आफ्ना सपनाहरु पूरा गर्ने रहर जागेर आयो । उनले घरबाहिर निस्केर केही नयाँ गर्ने दृढ प्रतिज्ञा लिईन् । विस्तारै, परिवार र साथीभाईको मद्दतले उनले पेन्टिंग गर्न थालिन् । उनका कला धेरैले मन पराए । विस्तारै, उनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बन्दै गईन् र उनको हौसलाको कथा सबैले थाहा पाए । उनी हम न्यूजको सामाजिक कार्यक्रम ‘मैं नही हम’ मा होस्टको रूपमा देखा परिन्। यसरी, उनको साहसको कथा विश्वभर फैलियो ।
अहिले मजारी एक अभियन्ता, एंकर कलाकार, मोडल, गायिका र प्रेरक वक्ता पनि हुन्। उनको संघर्षको कथाले मानिसहरुलाई जीवनमा जे भए पनि फेरी उठेर अगाडी बढ्न पर्छ है भन्ने गहकिलो पाठ सिकाएको छ ।